अविवाहित महिलाको सं’ख्या ब’ढेपछि प्रत्येक पु’रुषले दुई वटा विवाह नगरेमा क’डा स’जाय”,हेर्नुस कुन देश हो? – Wow Sansar
January 2, 2021 86
एजेन्सी – हाम्रो देशमा दुई विवाह गर्नेलाई कानुन लाग्ने गर्छ । एक भन्दा बढी श्रीमती विवाह गर्ने पुरुषलाई कानु नीरुपमा सजाय दिने गरिन्छ । तर यस्तो अनौठो ठाउँ पनि छ, जहाँ दुई विवाह नगरेमा सजाय दिइन्छ । तपाई लाई पत्यार नलाग्ला, तर अफ्रिकी देश इरिट्रियामा पुरुषले २ वटा श्रीमती बनाउनै पर्छ । यदि बहुबिबाह नगरे सजाय भोग्नु भोग्नुपर्छ । यहाँ पुरुषको संख्या धेरै भएकाले यस्तो कानुन बनाइएको बताइएको छ ।
Prevबझागं छोडेर अचानक किन रुँदै काठमाडौ फर्किइन् सोनिका रोकाय ? (भिडियो हेर्नुस्)
Nextयसरी दिएकाे थियाे मन्त्री साहकाे गाडीले ठक्कर (भिडियाे)
अचम्म को दुनियाँ : छोरासँग बिहे गरेर आमा बन्दै छिन यी महिला ! – भिडियो सहित
बुबा साउदीमा, आमा अर्कैसँग गईन् : सात दिनपछि भेटिइन् बेपत्ता तीन वर्षीया छोरी